China Umatshini wokucoca isinyithi we-Wheel-XYS-CY0817 abavelisi kunye nabathengisi | Xieyanshi
Metal wokucoca Compound for Buffing Wheels-XYS-CY0817
Ngumcoci wepeyinti oqeqeshiweyo osetyenziselwa umatshini wokucoca ngesantya se-1000-2000 rpm. Inokususa ngokufanelekileyo amanqaku esanti e-P1500 kunye ne-sandpaper entle, kunye nokususa okunye ukukrwela, iimpazamo, kunye ne-oxide layments!
Izinto zokugqiba zeXYS-CY-0817
Izixhobo zethu zokucoca isinyithi zisetyenziselwa iiVili zethu zoMbane oMileyo ukuze sandise ukusebenza kwevili ngelixa lisetyenziswa ngexesha lokusika, ukubetha kunye nokupolisha. Ezinye zezinto ezingaguquguqukiyo kwaye zihlala zisetyenziselwa ukususa imikrwelo ngelixa ezinye zigqibelele, ezibolekisa ukuba zisetyenziselwe ukuqaqamba nokuwugqiba umsebenzi wakho. Kufuneka zisetyenziswe kumavili e-airway ebalekayo ngokugquma imiphetho yeebhutsi zomoya
1. Beka isixa esifanelekileyo seCY-0817 kwindawo apho ifuna ukupholishwa khona. Yandisa i-wax ngokulinganayo ngevili lokucoca uboya (ivili lokucoca isiponji).
2, qala umatshini wokucoca ngevili lokucoca uboya (ivili lokucoca isiponji) ukugcina isantya esifanayo, kwaye ngokuthe ngcembe kuvavanyo loxinzelelo, xa i-wax iye yoma kancinci, ukunciphisa uxinzelelo oluqhubekayo lokucoca, de kube ipeyinti ifikelela kukukhanya okuqaqambe kakhulu!
6.Phepha unxibelelwano lwabantwana!
Ndiyilungiselela njani ipolishi?
Ukulungiselela phantse konke malunga nesanti. Sincoma ukuqala nge-180 grit kumavili amaninzi kwaye uye phambili ukuya kwi-220 grit, kwaye ugqibe nge-400 grit disks disks. Uninzi lokucoca, ialuminiyam, lunokucocwa kakuhle emva kokuphakwa nge-400 grit-i-finer grits azihlali ziyimfuneko ngaphambi kokucoca i-tripoli compound.
Amanqaku amabini okugcina engqondweni ukuba njengenye yeediski zeesanti enye yeemveliso ezidumileyo yi-buff kunye nokudibanisa iidiski zangaphambili. Uninzi lwabasebenzisi aluyi kufuna i-green buff kunye nokudibanisa iidiski njengoko zihlala zisetyenziswa ngakumbi kumavili ekhonkrithi. I-blue buff kunye ne-disc yokudibanisa inokukunceda ukususa ukungcola, ukungcola kunye nokugqwala kwivili ukubonelela ngendawo ecocekileyo ukuqala ukupholisha ngokudibanisa. Sincoma ukuba sibethe ivili lealuminium nge-maroon satin yomoya ngaphambi kokuba siye kupolish kunye ne-tripoli compound njengoko i-blue buff kunye nokudibanisa idiski kungashiya amanye amanqaku angayi kuphuma ngaphandle kwesanti eyi-400 grit okanye imaroon yomoya.
Egqithileyo Ukunyamekelwa kweemoto ukuCoca indawo yeesampulu zasimahla-XYS-CY0816
Okulandelayo: XYS Professional arhente wokucoca mechanical-CY0818